Tirada dadka qaadanaya dhalashada Sweden oo siyaaday | Somaliska
Tirada dadka qaadanaya dhalashada Sweden oo siyaaday
Maalinta Qaranka Sweden oo ku beegnayd shalay 6-da June ayaa ah maalin ka sagoow dabaaldegga calanka sidoo kale lagu soo dhaweeyo muwaadiniinta cusub ee dhalashada qaatay.
Laanta Socdaalka Sweden ayaa warbixin ay soo daabacday ku soo bandhigtay tirada dadka dhalashada qaatay sanadkii hore iyo kuwa la filayo sanadkaan. Ilaa iyo maalintii qaranka ee sanadkii 2011 ayaa waxaa dhalashada Sweden la siiyay 29 920 oo qof. Dadkaas ayaa inta ugu badan waxay ka soo jeedaan wadamada Iraq, Poland, Serbia, Thailand iyo Turkey.
Sanadkaan 2012 ayaa la filayaa in ay dhalashada dalbadaan dad gaaraya 38 500 oo qof, halka sanadka soo socda ee 2013 ay tiradaas dhaafi doonto 40 000 oo qof. ilaa sanadkii 2005 ayaa Laanta Socdaalka Sweden waxay dhalashada siisay 175 211 oo qof. Waxaa muuqata in tirada dadka qaadanaya dhalashada ay saa’id u kordheyso.
Soomaalida ayaa u muuqda kuwa ugu yar ee qaadanaya dhalashada Sweden. Guud ahaan Soomaalida ku nool Sweden ayaa la aaminsanyahay in ay baasaboorka leeyihiin qiyaastii 10 000 oo qof.
Sakhiirada oo la sheegay in ay fahmi karaan maadada Fiisigiska
Dhalinyaro haysata dhalashada Sweden oo ku biirtay dagaalka Soomaaliya.
June 7, 2012 at 10:50
asc somali waxe laqadala,dahay waa sabab la xirirta waqtikaga oo nol kordhiyay hadi ee ahaa lahed 5 yrs in intas waa ka badnalahayeen wadamadakale waxe ku qatan 5yrs
June 7, 2012 at 13:39
hadii somalida ee leyihiin 10 000 anaka oo dhan meqanahay? waxaan ogahay somalida ugu tirada badan inii imadeen sanedkii 2007 marku ahaay
June 7, 2012 at 14:01
Waa sodahay manta kkkkkk
Asc saredo minad so dahdey xaa nogu sheege kkkk
MASSAGO till Sareedo says:
Shalay mey ehed mugaad kadacwoo heesay magacaaga lagula is ticmaalay.
Hada qoftaan ugu dambeeyo ee ku jawaabay aniga ma,ahin magacayga awna wadtaa Somali waataas meel looga baxsahaa maleh Allah kacabso sxboow magacaan wax xuman ah haku sameeyn ama wax raaaci kuley aniga magacaan anaa lehe
Sweden dhalashadeedu Soomaalida ha u danbeysee bal marka hore mideeya qoysaska iyo caruurtooda iyo lamaanaha kala irdhhobey, Dhalasho Sweden nagama heysee!!!!!???
waan ku salaamay jimcale waxaan rabaa in aan ogaado qofka haysta resedokument meeqa sano ayuu ku qaadanayaa dhala shada waa jineva konvention 28 juli 1951 muhiim ayay iitahay jawaab tu mahadsanid
Waxaan u sameynayaa bogga qeyb uu qofkii doonaya magaciisa diiwaan gashan karo, isla markaana uu sawir saaran karo sida kayga oo kale.Insha Allah maanta ayay dhamaaneysaa!!!
Musse inta aan ogahay qofka Soomaaliga ah ee aan cadeyn karin aqoonsigiisa sharciga nuuckasta ha ahaatee mudadu waa 8 sano.
war waxaad ila eg tahay wiil la dhaho axamed jimacale ma kaas ba tahay talow
Dadkaan haadi aniga an madaxweyne unoqon lahaa waxaan u furilahaa xanaano lagu tarabiyeyo ilaa iyo inta ay kagaarayaan 50 sano xataa skol umadireen edebta kaliya ayan bari lahaa iyo hab dhaqanka.. hadii kale amaan lagama helaayo wa nooc minal rabo xumo.. dulmi fooqal dulmi kkkk
asc jimcaale qolka aad furaysi mic uyeel cml si looga wada hadlo midakale sawirka anaga waan isnaqana ma dumar amase rag ayaa sawir run soo saaraya mid walba wuxuu soo saraya qurux badan uu san lahayn hahahaha hahaha
Jimcaale sxb waxaan rabay inaan ku waydiiyo ku jiro kronofogden oo hade bilkaste bixiyo lacagtoo ma dalbankara..thanx??
June 8, 2012 at 10:58
Qofka deynta lagu leeyahay waxaa macquul ah in codsiga baasaboorka laga diido ama ilaa 2 sano uu sugo haddii deyn lagu leeyahay. Sida ku cad warbixinta Laanta Socdaalka. Marka haddii dayn lagugu leeyahay baaska ma qaadan kartid.
Asc Jamac saxib waxaan ku weydiinayaa ma isoo qori kartaa halkan aan ka heli meesha laga buuxiyo formka dadka loo dacwoonayo aniga oo joogo Sweden ayaan rabaa in aan buuxiyee plz i caawi
Halkaan ayaad ka xareysan kartaa dacwada. Waa online. http://www.migrationsverket.se/info/5517.html
asc jimcale waxad modaa inad hada bulshada so dhax gashay, jawabo iyo fariimo iyo waliba fikridada kudar sanayso maclumadka ad bulshada so dhaxdhigto wana wax mar hore laga bahnaa. ha yeshee waxan ku leyahay good job . tankale dadalka siiwad baloo laga yaabo inad noqoto sidi ”DR PHIL” CML. MUSTAQBALKA .ilen somali aya nahay ceed wax noshegto wanu u bahanahay ruun iyo been intaba .. cafwan kkkk
June 18, 2012 at 15:01
waxaan aad ula yaabay jimcaalow qormo aad soo qortay oo sheegaysa in baasaboorka seden lagu xirayn luuqada tas waa wax aan laqaadan karin sababtoo ah luuqada wadankaan luuqad maahan wax labaran karana maahan marka waa inay kanoqdaan warkaas haduuba run yahay